မဒေါင်းလုပ် VLC Media Player မအဘို့ Windows
မအခမဲ့ မဒေါင်းလုပ် မအဘို့ Windows (40.70 MB)
မဒေါင်းလုပ် VLC Media Player,
VLC Media Player သည်ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူများအကြားလူသိများသောအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်၏မီဒီယာဖိုင်များကိုပြcomputersနာမရှိဘဲကစားနိုင်ရန်အတွက်အခမဲ့မီဒီယာဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
VLC Player - အခမဲ့မီဒီယာဖွင့်စက်ကို Download လုပ်ပါ
ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်နှစ်ခုလုံးအတွက်ဖိုင် extension အားလုံးနီးပါးကိုထောက်ပံ့သည် VLC သည်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများစွာ၏မီဒီယာဖွင့်စက်၏အကြိုက်များတွင်ဤအင်္ဂါရပ်တစ်ခုတည်းနှင့်ပင်ပထမနေရာတွင်ရှိသည်။
သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုရှိခြင်း၊ VLC Player သည်သင်တပ်ဆင်နေစဉ်ကာလအတွင်းသင့်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သင်တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်း VLC နှင့်သင်ဖွင့်လိုသည့်ဖိုင် extension အားလုံးကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး VLC တွင်သင်သတ်မှတ်ထားသောဖိုင် extension ဖြင့်မီဒီယာဖိုင်များကိုပုံမှန်မီဒီယာဖွင့်စက်ဖြင့်ဖွင့်နိုင်သည်။
အဆင့်အားလုံးရှိကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သည့်ရိုးရှင်းသော၊ နားလည်လွယ်သောသုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်ရှိသည့် VLC Player သည်မီဒီယာဖိုင်များဖွင့်ခြင်းကိုလုံး ၀ အာရုံစိုက်သည်။ မီဒီယာဖိုင်များကိုချောမွေ့စွာနှင့်မြန်ဆန်စွာဖွင့်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်အဆင့်မြင့်။ ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသောအစီအစဉ်သည်စျေးကွက်ထဲမှ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ဆော့ဝဲလ်အတွက်တီထွင်ထားသောကွဲပြားသော interface ရွေးချယ်မှုများကိုလွယ်ကူစွာသင်အလွယ်တကူရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဂန္တဝင် VLC Media Player အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်နှင့်ငြီးငွေ့နေသောအသုံးပြုသူများအတွက်အဓိကပံ့ပိုးမှုပေးသောဆော့ဖ်ဝဲအတွက်တီထွင်သူများစာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်စတင်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်။
အသုံးပြုသူများကိုစိတ် ၀ င်စားမှုအမျိုးမျိုးနှင့်အမျိုးမျိုးသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများကိုပေးသော VLC Media Player သည် theme support အပြင်သင့်အားမီဒီယာဖွင့်စက်မှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။
ထိုအချိန်တွင်သင်ဖွင့်နေသောဗွီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များနှင့် ပတ်သက်၍ မတူညီသောအချက်အလက်များကိုလည်းပေးထားသည့်ပရိုဂရမ်၏အကူအညီဖြင့်သင်အလိုရှိပါကအသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုများကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ပရိုဂရမ်၏အကူအညီဖြင့်၊ အွန်လိုင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောရင်းမြစ်များမှထုတ်လွှင့်သည့်အသံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုအစီအစဉ်များကိုသင်လိုက်နာနိုင်သည့်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုသင်ကြည့်နေသည့်သို့မဟုတ်နားထောင်နေသည့်အရာများကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ ပြီးနောက်သင်အလိုရှိပါကထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ရှုနားထောင်နိုင်သည်။
သင်ကြည့်နေသောဗွီဒီယိုအရည်အသွေးသို့မဟုတ်သင်နားထောင်နေသည့်တေးဂီတအရည်အသွေးတိုးမြှင့်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ချိန်ညှိချက်များသည် VLC Media Player တွင်သင့်အားပေးသောကောင်းချီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ 12-channel equalizer နှင့်ကောင်းမွန်သောအသံချိန်ညှိချက်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကသင့်အားကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်၌သင့်ကိုခံစားခွင့်ပြုရန် VLC တွင်သင်ကိုစောင့်နေလျက်ရှိသည်။
ဤအရာအလုံးစုံအပြင် VLC သည်ချုံ့ခြင်း၊ အရောင်တင်ခြင်း၊ ပန်းချီကားများထည့်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုများတွင်အဆင့်မြင့် filter option များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုများနှင့်အဆင့်မြင့်စာတန်းထိုးအထောက်အပံ့များအကြားထပ်တူပြုခြင်းစသည့်ရွေးစရာများကိုလည်းပေးထားသည်။
VLC Media Player ရှိသည့်ဤအဆင့်မြင့်သောအရာများအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသော်၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အဆင့်မြင့်မီဒီယာဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သော user interface၊ သင်အသုံးပြုနိုင်သောအလွန်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်း၊ အဆင့်မြင့်အသံနှင့်ဗွီဒီယိုဖိုင်အထောက်အပံ့နှင့် VLC Media Player ပေါ်တွင်သင်ပိုမိုစောင့်ဆိုင်းနေစရာများရှိသည်။
စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော interface ဖြေရှင်းနည်းများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
Settings menu ကို Simple and Advanced သို့အမျိုးအစားခွဲခြင်း။
VLC Media Player မသတ်မှတ်ချက်များ
မဖိုင်အရွယ်အစား: 40.70 MB
တီထွင်သူ: VideoLan Team
Advanced SystemCare ကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းအားဖြင့်၊...
PC Repair Tool (Outbyte PC Repair) သည် ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်စနစ်သန့်ရှင်းရေး၊...
Clean Master ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ Clean Master...
Visual Studio 2015၊ 2017 နှင့် 2019 အတွက် Microsoft Visual C ++...
VLC Media Player သည်ကွန်ပြူတာအသုံးပြုသူများအကြားလူသိများသောအခမဲ့ဖြစ်သည်။...
Rufus ဟာသေးငယ်ပြီးသုံးရလွယ်ကူပြီးအခမဲ့ bootable USB disks များကိုဖန်တီးပေးသော program တစ်ခုဖြစ်သည်။...
Wise Driver Care သည် Windows ဗားရှင်းများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အခမဲ့ driver updater program...
Screen Color Picker သည်သင်၏ desktop ပေါ်တွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်အရောင်အတွက်မဆို RGB, HSB...
Microsoft Visual C ++ 2005 ဆိုသည်မှာ application များ၊ ပရိုဂရမ်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်အလားတူ ၀...